Mpanamboatra LED mpamatsy fotsy | China White LED Factory
White SMD LED 4014 Mamirapiratra avo
Famaritana ny vokatra Ny 4014 White LED izay namboarina tamin'ny fampiasana puce manga sy phosfor. Teknolojia fonosana fandrosoana mandroso (centrifugal), hazavana mitovy fanamiana, fampisehoana fanoherana volo volo tena tsara, mifanaraka amin'ny fenitry ny fitsapana iraisam-pirenena any Etazonia Energy Star; Kitapo tariby volamena, vokatra amin'ny alàlan'ny fiakaran'ny maripana avo sy ambany (-40 ℃ / 30min ~ 125 ℃ / 3omin) fitsapana fahatokisana 500 fihodinana, avo kokoa noho ny fitsapana fitokisana azo itokisana indrindra eo amin'ny indostria ...
Bulb LED 5050 misy fanoherana ny hafanana avo
Famaritana ny vokatra Ity 5050 LED Source Source ity dia fitaovana mahomby amin'ny angovo avo lenta izay mahazaka onjam-pamokarana mafana sy avo. Ny fonosana kely sy ny hamafiny dia mahatonga azy ho safidy tsara ho an'ny jiro LED, jiro jiro LED, jiro fantsom-batana LED, jiro ary sns. Ny White Power LED dia misy amin'ny mari-pana amin'ny loko 3000K ka hatramin'ny 6500K. Ity ampahany ity dia misy dian-tongotra izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny habe mitovy amin'ny LED eny an-tsena ankehitriny. • Size: 5.0 x 5.0 ...
2835 Jiro LED avo lenta
Famaritana ny vokatra Ity loharanom-pahazavana LED 2835 ity dia fitaovana mahomby amin'ny angovo avo lenta izay mahazaka onjam-pamokarana hafanana avo sy avo. Ny drafitra kely sy ny hamafiny avo lenta dia mahatonga azy io ho safidy tsara ho an'ny jiro LED, jiro jiro LED, jiro fantsom-batana LED, jiro ary sns. Ny White Power LED dia misy amin'ny mari-pana amin'ny loko 2600K ka hatramin'ny 7000K. Ity ampahany ity dia misy dian-tongotra izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny habe mitovy amin'ny LED eny an-tsena ankehitriny. • habe: 2,8 x 3 ....
2835 Hazavana avo lenta LED
Famaritana ny vokatra Ity loharanom-pahazavana LED 2835 ity dia fitaovana mahomby amin'ny angovo avo lenta izay mahazaka onjam-pamokarana hafanana avo sy avo. Ny drafitra kely sy ny hamafiny avo lenta dia mahatonga azy io ho safidy tsara ho an'ny jiro LED, jiro jiro LED, jiro fantsom-batana LED, jiro ary sns. Ny White Power LED dia misy amin'ny mari-pana amin'ny loko 2600K ka hatramin'ny 7000K. Ity ampahany ity dia misy dian-tongotra izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny habe mitovy amin'ny LED eny an-tsena ankehitriny. • Size: 2,8 x ...